Ogaden News Agency (ONA) – Diyaarad Yar oo Ku Dhacday Garoonka Muqdisho.
Diyaarad Yar oo Ku Dhacday Garoonka Muqdisho.
Wararka naga soo gaadhaya caasimada Soomaaliya ee Muqdisho ayaa sheegaya in diyaarad yar oo ay la socdeen afar qof ay shil ku gashay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, sida ay sheegeen goobjoogayaal.
Diyaaraddan ayaa la sheegay inay soo kiraysatay shirkad kala shaqaysa dhinaca amniga iyo gargaarka ciidamada AMISOM. Dhammaan afartii qof ee la socday diyaaradda ayaa la sheegayaa in la badbaadiyey, waxaana isla goobta diyaaradda ku dhacday markiiba gaadhay shaqaalaha dab damiska ee garoonka Muqdisho.
Shilkan ayaa la sheegay inuu muddo hakiyey duulimaadyadii kasoo degayey iyo kuwa ka dhoofayey garoonka diyaaradaha. Diyaaraddan weli ma cadda garoonka ay kasoo kicitintay, sidoo kale ma cadda waxa sababay shilka inkastoo warar hordhac ah ay sheegayaan in diyaaradda ay ku timid cillad farsamo.